निजि क्षेत्रको एक अग्रणी इन्टरनेट प्रदायक सस्था सुबिसुले आफ्नो ग्राहकहरुलाई घरघरमा इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यले तार बिनाको इन्टरनेट सेवा सुचारु गर्दै आइरहेको छ। यो तार बिनाको इन्टरनेट काठमान्डौ उपत्यका भन्दा बाहिरको ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर ल्याइएको छ।2Mbps,3Mbps र5Mbps को स्पिडमा प्राप्त हुने इन्टरनेट १ महिने, ३ महिने, ६ महिने र १२ महिने अबधिको प्याकेज अन्तर्गत रहेर ग्राहकहरुले आफ्नो घरमा जडान गर्न पाउनेछ।
मुल्य सुची सहितको सम्पूर्ण बिबरण निम्नानुसार रहेको छ।
2 Mbps स्पिडको इन्टरनेट तपाईले आफ्नो घरमा जडान गर्न चाहनुहुन्छ भने १ महिने, ३ महिने, ६ महिने अथवा १२ महिने अबधिको कुनैपनि प्याकेज अन्तर्गत रहेर जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
१ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १, १०० /-, डिभाइस Activation शुल्क र. ४, ४२५ /- टस सिंगल एन्टेना राउटर शुल्क रु. १, ५०० /- सहित जम्मा रु. ७, ०२५ /- शुल्क पर्छ।
३ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. ३, १५० /-, डिभाइस Activation शुल्क र. २, २१३ /- टस सिंगल एन्टेना राउटर शुल्क रु. १, ५०० /- सहित जम्मा रु. ६, ८६३ /- शुल्क पर्छ।
६ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत ६ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. ६, ००० /-, डिभाइस Activation शुल्क र. १, ३२८ /- टस सिंगल एन्टेना राउटर शुल्क रु. १, ५०० /- सहित जम्मा रु. ८, ८२८ /- शुल्क पर्छ।
१२ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १०, ८०० /-, डिभाइस Activation शुल्क र. ४४३ /- टस सिंगल एन्टेना राउटर शुल्क रु. १, ५०० /- सहित जम्मा रु. १२, ७४३ /- शुल्क पर्छ।
माथिको उल्लेख शुल्क कर बाहेकको शुल्क हो। र यदि तपाईले सिंगल एन्टेनाको ठाउमा डबल एन्टेना राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको मूल्य रु. २, ५०० /- पर्छ।
3 Mbps स्पिडको इन्टरनेट तपाईले आफ्नो घरमा जडान गर्न चाहनुहुन्छ भने १ महिने, ३ महिने, ६ महिने अथवा १२ महिने अबधिको कुनैपनि प्याकेज अन्तर्गत रहेर जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
१ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १, ६५० /-, डिभाइस Activation शुल्क र. ४, ४२५ /- , टस सिंगल एन्टेना राउटर शुल्क रु. १, ५०० /- र इन्स्टलेसन शुल्क रु. १००० /- सहित जम्मा रु. ८, ५७५ /- शुल्क पर्छ।
३ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. ४, ८०० /-, डिभाइस Activation शुल्क र. २, २१३ /- , टस सिंगल एन्टेना राउटर शुल्क रु. १, ५०० /- र इन्स्टलेसन शुल्क रु. ५०० /- सहित जम्मा रु. ९, ०१३ /- शुल्क पर्छ।
६ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत ६ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. ९, ३०० /-, डिभाइस Activation शुल्क र. १, ३२८ /- टस सिंगल एन्टेना राउटर शुल्क रु. १, ५०० /- सहित जम्मा रु. १२, १२८ /- शुल्क पर्छ।
१२ महिने प्याकेज – यो प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाको अग्रिम भुक्तानी रु. १७, ४०० /-, डिभाइस Activation शुल्क र. ४४३ /- टस सिंगल एन्टेना राउटर शुल्क रु. १, ५०० /- सहित जम्मा रु. १९, ३४३ /- शुल्क पर्छ।
5 Mbps स्पिडको इन्टरनेट तपाईले आफ्नो घरमा जडान गर्न चाहनुहुन्छ भने १ महिने, ३ महिने, ६ महिने अथवा १२ महिने अबधिको कुनैपनि प्याकेज अन्तर्गत रहेर जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
क्लासिक टेकको फाइबर इन्टरनेट सेवा (कार्यालय प्रयोजनको लागी): मुल्यसहित सम्पूर्ण जानकारी
डीसहोम एनसेल सुबिसु भायनेट वेबसर्फर ब्रोडलिङ्क क्लासिक टेक वर्ल्डलिङ्क नेपाल टेलिकम